Zenzekelayo Big SPJ150 Batch pre-expander eyimpumelelo ebaleka eSaudi. Ikhethekileyo kubuninzi obuphantsi. Umatshini unokwandiswa kokuqala nokuphindwe kabini, ukuchukumisa isikrini kunye ne-PLC elawulwayo, ukufikelela ngokulula kwi-8g / l nge-Sabic F760 kunye ne-China Material ZKF 302.
Ukuhonjiswa kwe-EPS yinto yokwakha entsha yokuhombisa udonga lwangaphandle kunye nokuhonjiswa kwesilingi ngaphakathi, okwenzeka kwinkqubo yeGRC, ukuhonjiswa kweMarble, kunye ne-GYPSUM kumhombiso ongaphakathi, ngenxa yamanqaku alandelayo: 1, Multi kunye noyilo olulula. 2, ubunzima bokukhanya. 3, Uqoqosho ...
Ngenxa yentsholongwane yaseCorona, Siqala ukusebenza nge-18 kaFebruwari 2020 emva kwekhefu elide. Ngenxa yesakhiwo esiluhlaza, ndingathanda ukubulela ngenkxaso yakho kwi-2019 kunye nenkxalabo kuthi rhoqo, Siza kugxila ngokuqhubekayo kwicandelo lezemveliso le-EPS, sikubonelele ngenkonzo yobungcali. Ndinqwenela ukuba ...
Intshayelelo Kwi-Eps Foam Board
Amaso e-polystyrene eyandisiweyo enento yokwenza nolwelo olunamagwebu agqwesileyo zizinto ezimhlophe ezishushu kwaye zibunjiwe kwisikhunta emva kokufudumeza kwangaphambili. Banobunjani beempawu zeseli ezivaliweyo. Ibhodi yegwebu ye-b1 yebakala le-eps yinto emhlophe eyenziwe ngeentsimbi ezinokwandiswa ze-polystyrene eziqukethe ...
I-Lanxi Lvjian yeFektri yeZinto zoKwakha eNtsha, ivelisa eyona migca ilungileyo ye-EPS yegwebu
I-Lanxi Lvjian Izinto zokwakha ezitsha Co., Ltd.yinkampani ebanzi yemveliso ehlanganisa imveliso, uphando kunye nophuhliso, ukuthengisa kunye nokufakwa. Ngokusekwe ekwetyisweni nasekuhlanganisweni kwetekhnoloji yamanye amazwe, inkampani ngokuzimeleyo iphanda kwaye iphuhlisa i-EPS kunye ...
Amanqaku kwi-EPS Mold
Isakhiwo esiluhlaza sasine-shishini elikhulu lokuthatha isikhunta se-EPS ngo-2019, sanikezela zonke iintlobo ezahlukeneyo zokubumba kwihlabathi lonke, ezifana nephakheji yezixhobo zasekhaya, izixhobo ze-AC, faka ibhloko kunye ne-hordi yokwakha isikhunta, kunye neentlanzi kunye nebhokisi yemifuno ukungunda. ...
Zeziphi izinto eziluncedo onomdla kuzo zee-Eps Lines
Zeziphi izibonelelo ezinomtsalane kwimigca ye-EPS? Imigca ye-EPS inokugqibezela ulondolozo lobushushu, kwaye umhombiso uhambelana. Isombulule ingxaki ekuqhekekeni komhlaba, ukuze ulwakhiwo, ukufakelwa, ukufakwa kwe-thermal kunye neengxaki zebhulorho ye-thermal zemigca eyahlukeneyo yokuhombisa ...
Umatshini we-Eps Foam Cornice, Eps amagwebu Cornice Imilo Ukubumbela Machine, Eps Cornice Ukubumbela Ukwenza, Eps Cornice Imilo Ukubumbela Machine, Eps Cornice Ukubumbela Line, Eps Cornice Ukubumbela Production Line,